“Xildhibaanadaasi waxa u sharaf badnaa iyagoo yidhaahda waanu is casilnay” Xil Xasan Xaydh | Somaliland.Org
August 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xildhibaan Xasan Cabdi Maxamuud (Xasan Xaydh) oo ka mid ah Mudaneyaasha Golaha Deegaanka Hargeysa, ayaa sheegay inaanay Golahaasi wakiil ka ahayn Mudaneyaal ka tirsan Golahooda oo Madaxweynaha u soo jeediyay in la kala diro Golahaasi oo ay ku eedeeyeen inuu gudan waayay xilkiisii.
Xildhibaan Xasan Xaydh oo u waramayay Shabakada wararka ee Somaliland.Org, waxaanu wax ka weydiinay aragtidiisa ku wajahan Baaqii Mudaneyaashii soo jeediyay kala dirida Golaha Deegaanka Hargeysa waxa uu yidhi “Waxaan kuu sheegayaa Mudaneyaashii aad sheegaysaa horta anaga Gole ahaan baaqaasi ay soo jeediyeen Wakiil Nagagama aha . Golaha digamma waa la kala diri karaa laakiin way Leedahay shuruudo Iyo Xeer kaasi. Taasna waxa ugu wacan markii sida xeerka Gobolada iyo degmooyinku tilmaamayo laga diiday fadhi aan caadi ahayn oo ay doonayeen inay xilka kaga qaadaan Maayar Ku xigeenka. Xeerkaasi waxa uu dhigayaa in sanadka hore iyo ka u dambeeya ee muddo xileedka Golaha Deegaanka aan xilka laga qaadi Karin Maayarka iyo Ku xigeenka.” Md. Xasan Xaydh waxa uu sheegay in Mudaneyaashaasi ay u sharaf badnaan lahayd inay ku dhawaaqaan inay is casilaan, waxaanu yidhi “Wax kastaa ha jiraan oo ha sababaane’e malaa waxa Xildhibaanadaasi u sharaf badnaan lahaa iyagoo yidhaahda Maayarkii iyo Maayar Ku Xigeenkii aanu dooranay markii ay na yeeli waayeen waanu is casilnay. Laakiin waxa muuqata in ujeedadoodu ay ahayd uun hadalkaasi ka dhashay mooshinkii sharci darrada ahaa ee la Joojiya.”
Xildhibaan Xasan Xaydh oo aanu weydiinay waxa uu kaga jawaabayo eedaha musuqmaasuq ee loo jeedinayo Maayarka Iyo Ku xigeenkiisa, waxaanu ku jawaabay “Anigu ma qabo in musuqmaasuq jiro shalayna hanti dhawr baa ku jiray imikana inuu ku jiro iyo in ka baxay garan maayee iyagaa soo shjeegi lahaa .Anigu waxaan aaminsan nahay musuqmaasuq haddii uu jiro Golaha deegaanku wuu shiraa oo labadii biloodba shir ayaa la qabtaaye’e musuqmaasuqa ay sheegayaan inay Golaha Keenaan. Markaa nin Xildhibaan ahi wax masuuliyiintayada ku cad haddii la keeno nina taageeri maayo oo baadil laguma difaacayo. Waxaan leeyahay haddii ay wax hayaan Golaha ha Keenan.”
“Horta waxa ILAAHAY mahaddii ah Hargeysi sali ayay ku wada fadhidaa, waanay is ogtahay raggan aad sheegaysaa, waa kuwii markii aan Anigu soo eedeyn jiray Maayarka difaaci jiray ee sidaasi ula soco, halkaasna u dhaafi maayo,”ayuu yidhi Xildhibaan Xasan Xaydh.
Previous PostXukuumada Somaliland Waxay Ku Socotaa Jidkii HorumarkaNext PostWasiirka Warfaafinta Oo Ka Hadlay Xiliga Dalka Laga Hirgelinayo Idaacad weyn oo Gobolada wada gaadha	Blog